Xarunta Tababbarka Bixiyaha - Caymiska Caafimaadka Deegaanka ee Gobolka Washington - CHPW
Raadi tababaro caafimaad iyo ilo caafimaad, Maamulka Daryeelka Caafimaadka (HCA) loo baahan yahay iyo tababbarka CMS, sida loo isticmaalo boggeena bixiyaha, iyo ilaha aad ugu baahan tahay biilasha iyo sheegashooyinka.
Waxaan halkaan u joognaa inaan kaa caawinno inaad sii wadatid barashadaada
Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington (CHPW) wuxuu fududeynayaa la socoshada tababarka muhiimka ah ee bixiyaha. Waxaan sidoo kale bixinnaa ilo tababar oo dheeri ah iyo macluumaad kaa caawinaya inaad howshaada si habsami leh ugu socoto.
Tababarka Tababbarka Caafimaadka
Baadh ilaha caafimaad, tababaro muuqda, oo raadi jadwalkeena tababarka si aad u hesho dhacdooyin kor u qaadaya shaqadaada.
Waxbadan Ka Baro ➜
Tababbarka CMS iyo HCA
CMS iyo HCA waxay kugula talinayaan tababaro bixiyeyaal kala duwan, qaar qasab ah iyo kuwa kale ikhtiyaari.
Baro sida loo gudbiyo loona arko codsiyada, marin u helka macluumaadka bukaanka, oo ku dul saar waraaqahaaga dushiisa.
Waxaan rabnaa inaan kaa caawino inaad howshaada u wado si habsami leh. Ka hel foomamka qaansheegadka, hagida, tababarka, iyo macluumaadka kale ee muhiimka ah boggayaga Biil-bixinta iyo Sheegashooyinka.
Halkaan si aad uga Caawiso Waxyaabaha Sahlan
Na soo ogeysii sida khibradaada aad uheshay CHPW ay usoo bandhigtay wixii fikrad ah ee aad hayso.
Qaado Sahaminta ➜
Waxaan halkaan u nimid inaan shaqadaada fududeyno. Eeg jawaabahayaga faahfaahsan ee su'aalaha muhiimka ah iyo kuwa badanaa la isweydiiyo.
Eeg Su'aalaha ➜
Soo gal Buugga Bixiyaha CHPW markasta oo aad u baahato. Buugga Bixiyaha waa la cusbooneysiiyaa sanadkiiba.
Akhriso Buugga ➜
Taariikhda Ugu Dambeysa ee Cusboonaysiinta: Maarso 30, 2021